Uqwela ama 20 esenza umahluko | News24
Uqwela ama 20 esenza umahluko
Umama uNompumelelo Ngoqo esegadini yakhe kwaLanga.Iimifanekiso: UNATHI OBOSE
Amalungu ombutho i-Urban Rural Development and Capacity Building Project kwa Langa abhiyozela ukufinca iminyaka engama 20 esebenza kunye ukuzama ukuphucula impilo yoluntu nokulwa indlala ekuhlaleni.
Lo mbutho waqulunqwa ngomnyaka ka 2000 ngu mama u-Nompumelelo Ngoqo ukuze utshintshe impilo yoluntu, kwaye ugxininise ikakhulu kwezolimo.
Ukanti sele uneegadi ezingama 26 kwiingingqi ezahlukeneyo kuquka iKhayelitsha, Mfuleni, Nyanga, Philippi, Manenberg, Samora Machel kunye nase Harare.
Kudliwanondlebe ne City Vision, u-Ngoqo (onama 73) uthe bawuqala lo mbutho bengamakhosikazi amane ngenjongo zokufundisa abantu ngokusebenzisa umhlaba nangokulima ngokubanzi.
Uthe baqala baqeqesha abantu abangama 50. “Saqala saqeqesha iqela lokuqala elingama 25 iinyanga ezintandathu, saze saphinda sathatha elinye. Samane sisenja njalo qho ngonyaka de sakhula,” uhambise watsho.
Uqhube wathi izinto zazithande ukuba nzima ekuqaleni ngoba inxalenye yabantu yayi ngayiqondi yonke le nto.
Kodwa bathi gqolo ukusebenza, nyathelo elo lathi lakhokelela ekubeni lande inani labantu ababonisa umdla.
“Into esasiyenza yayi kukufundisa nokukhuthaza abantu ngokulima. Sasifuna abantu bayeke ukuxhomekeka, sifuna ukuba bazenzele. Sithe ngokuye sisebenza nangokuzimisela kwethu sawongwa ngesatifiketi yi Small Enterprise Development Agency (Seda),”ucacise watsho.
U-Ngoqo uthe ngomnyaka ka 2007 baqala iphulo lokulima iigadi behamba bekhuthaza abantu ukuba baqale iigadi ezincinci emakhayeni abo. Uthe babesiya naseMpuma Koloni behamba beqeqesha abantu.
“Ngomnyaka ka 2008 isebe lezophuhliso loluntu eNtshona Koloni langenelela lasixhasa laza nembono yokuba siphekele abantu isuphu, ingakumbi abagulayo, abangaphangeliyo nabasokolayo,” uthethe watsho. Waleke ngelithi emveni koko bafumana unxibelelwano ne arhente ejongene nophuhliso kunye nentlalontle yoluntu yoMzantsi Afrika, iSouth African Social Security Agency ( uSassa ngamafuphi). “U-Sassa zange onele nje ukuxhasa ngokutya, waye wanika abanye imali yesibonelelo (relief fund) eqala kwinyanga ezintathu ukuya kwezintandathu, kuxhomekeka indlela umntu agula ngayo. Abantu abaninzi batsho balibona utshintsho nasezimpilweni zabo, ngoba abanye babengakwazi ukutya iipilisi kuba babengenakutya ezindlini zabo,” uthethe watsho.
Uhambise wathi banabantu abangama 350 abancedisa kwezi gadi rhoqo ngeveki, kuquka nabantwana.
“Baninzi abantwana ababesiza kweezigadi ngempelaveki bezoncedisa sibabonelele ukuzama ukubakhuthaza. Omnye wabo ngu Xolelwa Dayimani, uligqwetha une ofisi Century City, ugqirha Lukhanyo Peter usebenza Groote Schuur, Sive Gabuza uyi town planner kwisiXeko saseKapa. Ukhona ofunda iMechanical Engineering wenza Btech uSomelele Tuku apha eCPUT, bonke ngabantwana ebendibaqeqesha ndibafundisa ukulima,” utsho ngebhongo.
U-Ngoqo nokwangumongikazi ngokwemfundo uthe sele etyelele amazwe amaninzi ehlabathini kuquka iJamani, iMelika kunye nelizwe lase Morocco ehamba eqeqeshwa nje ngosomashishini osakhasayo.
Omnye wabantu abancedisayo uNokubonga Mdloyi uthe waqala ukusebenza noNgoqo kwiminyaka emine edlulileyo kwaye wonwabile.
“Umama uNqoqo ngumntu obathandayo abantu, uthobekile kwaye unovelwano ngomnye umntu. Oko ndafika apha ubom bam batshintsha. Ngamanye amaxesha siye sifumane noqeqesho kwisebe lezabasebenzi ukuzama uphuhlisa izakhono zethu,” utshilo uMdloyi.